Lorcaserin (Belviq) upfu (616202-92-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Lorcaserin upfu
Rating: SKU: 616202-92-7. Category: Fat Kurasikirwa poda
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kukura kwe Lorcaserin (Belviq) powder (616202-92-7), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Kubudisa kushanda kwakasimba uye kwakachengeteka kurasikirwa kwemishonga ibasa rinotyisa. Kuedza munguva yakapfuura kwakauya nemigumisiro yakawanda yakadai sekushaya mwoyo. Nenguva isipi, chidzidzo chitsva chinoreva kuti lorcaserin kuora mwoyo piritsi inogona kukubatsira kuti ude kurema uremu husingaiti kunze kwekuti ugoba nehutano hwemoyo wako. Lorcaserin inoshamisa chishuwo chekushaya piritsi, iyo yakagamuchirwa neDDA mu 2012. Asi chii chinonzi lorcaserin? Zvakanaka, pasi apa tsanangudzo yakadzama yechirwere, chimiro chemakemikari uye nzvimbo, inoshandisa, kuyerwa, kuchenjerera, nezvimwe zvakawanda.
Zita reMiti: Lorcaserin / BELVIQ (lorcaserin hydrochloride)
Lorcaserin (Belviq) poda vhidhiyo
I.Lorcaserin (Belviq) powder Basic Characters:
Name: Lorcaserin (Belviq) powder
Molecular Kurema: 195.692
Pasi pane chimiro chemakemikari e-lorcaserin mu 3-D kugadzirisa.
Chemical Zvivakwa zveLorcaserin (belviq) (CAS 616202-92-7)
Pazasi pane akapfupikiswa makemikari zvimiro zveLorcaserin (belviq); ivo vakaunzwa mutafura pazasi pekutarisa nekukurumidza.
Misa chaiye 195.081 g / mol
Tsanangudzo yakajeka ye Lorcaserin HCL powder
Lorcaserin (Belviq) chishuwo chinodzvinyirira piritsi rakagadzirwa neArena Pharmaceuticals. Icho chiri chekirasi yemishonga inonzi inonzi serotonin receptor agonists. Yakagadzirirwa kukubatsira kuti unzwe wakazara mushure mekunge wadya chikafu chidiki. Inodzvinyirira kudya nekumisikidza iyo 5-HT2C receptors, iyo ndiyo mhando dzeredotonin receptors mune imwe nzvimbo yeuropi (hypothalamus) inodzora chido. Apo pavanoratidza kuti muviri wako unonzwa wakakwana, unosvika pakudya zviduku, saka unopedzisira uchirasikirwa mukufamba kwenguva.
Belviq, ane makemikari zita (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine hydrochloride hemihydrate, inoreva kutorwa nomuromo. Iro molecular weight is 241.16 g / mol, uye iyo yakagadzirirwa inonzi C11H15Cl2N • 0.5H2O. Zvinyorwa zvaro zvakanyorwa pasi apa:
Iyo solubility yeLorcaserin hydrochloride hemihydrate mumvura yakakwira kupfuura 400 mg / mL. Piritsi reBelviq rine 10.4 milligrams e crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (chena kusvika off-chena poda), iyo yakaenzana ne10.0 milligrams anhydrous lorcaserin hydrochloride. Iyo inewo zvimwe zvinoshandiswa, zvinosanganisira magnesium stearate NF, talc USP, FD & C Bhuruu # 2 aluminium nyanza, titanium dioxide USP, polyethylene glycol NF, polyvinyl doro USP, colloidal silicon dioxide NF, croscarmellose sodium NF, silicified microcrystalline cellulose uye hydroxypropyl cellulose NF.
Chiito chekugadzira Lorcaserin
Maererano neKudya uye Drug Administration yekutsanangurira (2007), Lorcaserin inokwanisa kubatsira vanhu vakuru kuti vabudirire kuchipatara chinorema kurasika. Izvi zvinonzi kurasikirwa kwehutano zvinonzi kushanda zvakanaka kana paine huwandu hwekuita muviri uyewo kudya kwema-calorie. Inogona kubatsira zvikuru nekusingaperi kwekutakura, kunyanya nevanhu vane uwandu hwehuwandu (kunyanya 27 kg / m2), kana kuneta (BMI ye30 kg / m2). Iyi mishonga inogonawo kubatsira avo vane imwe kana kuti yakawanda zvine chokuita nehutano, yakadai sorudzi rwe2 chirwere cheshuga, dyslipidemia, kana kuti kuwedzera kwehutano.
Lorcaserin inoratidzira chirwere chinoda kuperesa piritsi iyo inosarudza sechinyakare se 5-HT2C receptor agonist mu hypothalamus nechisarudzo selectivity ye gumi nemashanu zvakanyanya kufanana kwe5-HT2C receptors kupfuura 5-HT2A uye iyopping a 100 nguva yakakwirira yebasa sarudzo ye 5-HT2C receptors kupfuura ye 5-HT2B.
5-HT2C zvinogamuchirwa zviri zvinongowanikwa chete muhuropi hwemunhu uye zvinogona kuwanikwa mune thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, uye amygdala. Iko kukurudzira kwe5-HT2C receptors mune iyo hypothalamus inogonesa POMC (proopiomelanocortin) kugadzirwa uye nekudaro inosimudzira kudzikisira uremu kuburikidza nekuguta. Iyi nharo inotsigirwa neyakaedzwa kiriniki miedzo uye zvimwe zvidzidzo zvekutsvaga. Ipo ichigara ichifungidzirwa kuti 5-HT2C receptors inobatsira mukugadzirisa chishuwo, endocrine secretion, uye manzwiro, iyo chaiyo maitiro ekuita mune yekudaira mutemo haazivikanwe.
Kushandisa Lorcaserin HCL powder
Kana tikafunga zvechokwadi reLorcaserin kuongororwa kunze uko, zvino izvi zvinogona kunge zvakanakisisa kuora kwepill pill pamusika nhasi. Vamwe vanhu vane uremu hwemusoro, kureva, avo vane mamiriro ekurapa ane chokuita nekurema kana avo vanorema vanogona kubatsirwa zvikuru nechigadzirwa ichi.
Kana ikashandiswa pamwe chete nechirongwa chechiremba chakabvumirwa kuita basa, chirongwa chekudya chekoriori, uye mararamiro ekuchinja, Lorcaserin inogona kubatsira munhu kuita zvakawanda pane kungoora uremu - zvinogona kubatsira kuderedza ngozi dzakawanda dzehutano dzinobatanidzwa nekuneta, kusanganisira high blood pressure, chirwere cheshuga, chirwere chemoyo, uye kufa kwekutanga.
Maererano neCentral for Disease Control, kurasikirwa kweA5 kusvika ku10 muzana yehutatu hwehutatu hunogona kupa humwe hutano hwehutano hwakadai sekuvandudzwa muropa yehuga, cholesterol yeropa, uye ropa.
Nhamba ye Lorcaserin HCL powder
Vakuru vanofanirwa kutora mapiritsi maviri pazuva. Saka iwe unoda kutora mapiritsi e60 pamwedzi. Maererano neCDA, munhu anofanira kushandisa chiremba panguva yese yehupenyu hwake kuchengetedza uremu hwakanaka.
Zvakakosha kuziva kuti zviitiko zvakanaka zvinofanira kuonekwa mushure memasvondo e12. Kana iwe uchinge usina kurasikirwa zvishoma ne5 muzana yemuviri wako wekutanga wekutanga wekutanga, iwe unorayirwa kurega kushandisa mapiritsi. Kunyangwe nekupfuurira kushandiswa, hazvisi zvishoma kuti iwe uchawana nekuchengetedza makiriniki anorema kuora kurasikirwa.
Lorcaserin HCL Kuchengetedza
Zvakanaka kuyeuka kuti nyanzvi yezvehutano yakaraira uyu mushonga nekuti vakaona kuti mukana waunowana wakakwirira kupfuura njodzi dzemhedzisiro. Vazhinji vanhu vanotora mushonga uyu havaratidze zvakakomba mhedzisiro.
Usati watora lorcaserin, rega wemishonga wako kana chiremba azive kana uri weergisi kune chinodhaka; kana kuti iwe une zvimwe zvinopesana. Lorcaserin ine zvinhu zvisina basa izvo zvinogona kukonzeresa kugadzikana kana zvimwe zvinhu. Kumbira wemishonga wako kuti akupe zvimwe zvakawanda.
Usati watora mushonga uyu, zivisa wemishonga wako kana chiremba nezvenhoroondo yako yekurapa, kunyanya matambudziko eitsvo, chirwere cheshuga, chinetso chechiropa, hosha dzemwoyo (kusanganisira moyo block, chirwere chevharuvhu yemoyo, kurova kwemoyo zvishoma, kutadza kwemoyo) matambudziko anogona kuwedzera njodzi zvinorwadza / zvinomira kwenguva refu mumarume (kusanganisira akaremara urume, chirwere chePyronie, multiple myeloma, sickle cell anemia, leukemia).
Ichi chishuwo chinodzvinyirira piritsi chinogona kukuita kuti unonoke kufunga kwako kana dzungu. Marijuana kana doro zvinogona kuita kuti izvi zviwedzere. Usashandise michina, kutyaira, kana kuita chero chinhu chinoda kusvinura kusvikira iwe uchikwanisa kuzviita nokungwarira. Deredza zvinwiwa zvinodhaka uye taura nachiremba wako kana uri kushandisa mbanje.
Kana iwe uchizovhiyiwa, zvine hungwaru kuti uudze chiremba wako wemazino kana chiremba nezve zvese zvigadzirwa zvaunotora (kusanganisira zvisina kunyoreswa zvinodhaka, zvigadzirwa zvemakwenzi, uye mishonga yemishonga).
Kana iwe uri kurarama nechirwere cheshuga, iyi yekuremerwa piritsi inogona kukanganisa shuga yako yeropa. Ita shuwa kuti utarise yako shuga yeropa nhanho nguva nenguva sezvaunorairwa uye ugovana zvabuda zvako nachiremba. Rega chiremba wako azive kana iwe uine mashoma eshuga eropa zviratidzo. Nyanzvi yako yehutano inogona kuda kuti uchinje chirongwa chako chekurovedza muviri, chikafu kana chirwere cheshuga.
Mushonga uyu haufanire kutorwa panguva yekuzvitakura nekuti unogona kukuvadza mwana asati azvarwa. Kumbira chiremba wako nezvekushandiswa kwemaitiro akavimbika ekudzivirira kuberekwa. Kana iwe uri nepamuviri kana kuva nepamuviri, udza wako wezvehutano nyanzvi nyanzvi nekukasira
Parizvino, hazvizivikanwe kana uyu mushonga unopinda mumukaka wechipfuva. Kudzivirira mukana wenjodzi kumucheche, kuyamwisa kana uchishandisa mushonga uyu hakukurudzirwe. Iva nechokwadi chekuti unobvunza chiremba wako usati wamuyamwisa.
Verenga iro Ruzivo rweMushandisi Reaflet zvakanyatsonaka kana uchiwanikwa kubva kuna chiremba usati watanga kushandisa lorcaserin uye chero nguva yaunowana kuzadza. Kana iwe uine chero mubvunzo, bvunza wako wemishonga kana chiremba.
Tora ichi chinodzvinyirira chinodzvinyirira piritsi nemuromo kana pasina kudya sekurairwa nachiremba wako, kazhinji kaviri pazuva. Shandisa ichi chinodhaka nguva dzose kuti uwane zvakazara mairi. Kuti ikubatsire kuyeuka, tora piritsi panguva dzakafanana mazuva ese.
Lorcaserin chirongwa chekuita tsika. Usawedzere chido kana kutora piritsi iyi kakawanda pane yakatemwa. Mamiriro aunayo haafaniri kuvandudza chero ipi zvayo nokukurumidza, uye ngozi yemigumisiro inogona kuwedzera.
Kubatana kwakanyanya kwemishonga kunogona kuitika apo mamwe madhiragi anoshandiswa pamwe ne lorcaserin piritsi. Taurira chiremba wako pamusoro pemishonga yose yaunoshandisa ikozvino, uye chero imwe mishonga inotanga iwe kana kumisa kushandisa.
Lorcaserin kuora kurasikirwa kwepiritsi haisi kubvumidzwa kuti ishandiswe nevanhu vakadarika makore anopfuura 18.
Ndinofanira kutora sei Lorcaserin HCL powder?
Usatsvaga, kuputsa, kana kupwanya piritsi yakasunungurwa-yakareba. Ingoimedza zvachose.
Lorcaserin chido chokudzvinyirira chinongova chikamu chepurogiramu yakakwana yekurapa iyo inofanirawo kusanganisira muviri, kurerisa, kudya, uye nguva dzose kuedza shuga yako yeropa. Tevera mishonga yako, kudya kunovaka muviri, uye miitiro yekushanda zvakaoma chaizvo.
Chengetedza mishonga pakushambidzwa kwemajeri kure nekupisa uye unyoro.
Chengetedza zvinyorwa zvehuwandu hwezvinodhaka zvinoshandiswa kubva mumabhodhoro ose. Lorcaserin kuora kurasikirwa piritsi ndeyekushandisa zvinodhaka, uye iwe unofanirwa kuziva nguva dzose kana mumwe munhu ari kushandisa mushonga wako pasina chiremba kana zvisina kunaka.
Usambofa ugovana mushonga we lorcaserin nemumwe munhu. Chengetedza mishonga munzvimbo umo pasina mumwe munhu anogona kuiwana.
Chii chinoitika kana iwe ukarasa Lorcaserin dose?
Ingotora mazamu asina kumira pakarepo iwe uchiyeuka. Iwe unofanirwa kutsika chirasi chakakanganwa kana nguva yenguva inotevera yakagadziriswa inenge yava pedyo. Usatora imwe mazamu kuti uzviitire murasi inoshaiwa.
Chii chinoitika kana iwe unodarika waLorcaserin?
Tsvaga rubatsiro rwemhizha rwekukurumidza kana kuti taura nePoison Help line pa 1-800-222-1222.
Ndechipi chandinofanira kudzivisa kutora paLorcaserin?
Usatora chero chimwe chepamusoro-che-chiremba kana chiremba chiremba-kurasikirwa kwemishonga pasina zano rechiremba wako. Uyewo, usatora mishonga inotonhora kana yekodha kana uchitora lorcaserin mapiritsi.
Ndeapi mamwe mishonga inogona kuchinja lorcaserin?
Iyi inotevera mishonga inogona kukanganisa mashandiro anoita lorcaserin:
"Triptan" iyo inonzi migraine misoro mishonga-yakadai saMaxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, nevamwe.
chero chero rudzi rweanodzvinyirira
erectile dysfunctiondrugs- Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, nevamwe;
tryptophan (inozivikanwawo seL-tryptophan);
kukosora kana kutonhora zvinodhaka zvine dextromethorphan; kana
mishonga yekurapa chirwere chepfungwa, kushushikana kana kusagadzikana kusagadzikana.
Urongwa huri pamusoro hahuwandu. Mamwe mishonga inogona kukanganisa lorcaserin, uye kwete kushamwaridzana kwose kunogona kuve kwakanyorwa mumutungamiri wemishonga iyi.
BBC Mishumo Pamusoro Pekuchengetedza uye Kubudirira kwaLorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Pakave nenhau dzakawanda dzeBBC pamusoro peLorcaserin pamusoro pekusaitika chete asi nekuchengetedzwa kwemishonga. Maererano neBBC, kuongorora kwechangobva kuitika, kwakabudiswa muNew England Journal of Medicine, inoratidza vanhu vachishandisa lorcaserin chido chekupedza mapiritsi vakarasikirwa nehuwandu hweHNUMXlb (8.8kg) pamusoro pekanguva yenguva shomanana makore matatu nehafu. Migumisiro yenyaya iyi yakaratidza kuti lorcaserin hapana mubvunzo chimwe chezvinhu zvakanakisisa kurasikirwa mapiritsi.
Mushumo unotiwo mushonga sezvo unoshanda nekudzivisa kudya kudya, usaisa vashandisi vari pangozi yepamamiriro ezvinhu emwoyo. Kuongorora kwakabudiswa kwakazotevera kukonzera 12,000 obese kana varwere vanopfuura kwereight muU.SA kwemwedzi ye40.
Pashure pemakore matatu nehafu, vanhu vakuru vachitora lorcaserin vaiwanzoita katatu kupfuura kuti vasati vadzikisa zvishanu kusvika gumi kubva muzana yemuviri wavo kupfuura avo vanogamuchira nzvimbo yebasa, maererano nomumwe wevatungamiri vekuongorora, Dr. Erin Bohula.
Miedzo yakaitwa pamwoyo valve haina kuratidza chero zvakasiyana zvakasiyana kana ichienzaniswa nemapapiro emwoyo evaya vanotora placebo. Tichifunga kuti iyi ndiyo ndiyo yainyanya kukoshesa kana iri pamusoro pokuchengetedzwa kwemamwe mapiritsi asingakanganisi, lorcaserin inogona kuva yakanakisisa yekurasikirwa piritsi.
Vakuru vanotora mishonga vaivewo panjodzi yakaderera yerudzi rwechipiri chirwere cheshuga. Iyo piritsi inodhura yakatenderedza £ 2-155 ($ 225-220) pamwedzi dhizeti muUS. Lorcaserin inopa yakanakisa imwe nzira kune inovhima uremu-kudzikamisa maitiro senge gastric bhendi kuvhiyiwa pakati pevamwe.
Mumwe mushumo weBBC wakaratidza chidzidzo chevatsvagiri paYunivhesiti yeAberdeen's Rowett Institute uyo akaita ongororo pamusoro pechido. Masayendisiti akati kutsvagurudza kwavo nezvechido kwakavatungamira kune chimwe chikamu cheuropi.
Vakacherechedza kuti kuburikidza nekufurira masero aya chaiwo nemishonga ivo vakakwanisa kuderedza kudya kwekudya. Sezvo lorcaserin inoshanda nenzira iyi, migumisiro yechirongwa ichi haina kungozarura masuo emishonga mitsva yakadai sa lorcaserin asi zvakare yakasimbisa izvo nyanzvi dzinotenda pamusoro pe lorcaserin -kuchengeteka kwayo uye kubudirira.